Mahomby sy azo antoka ny hery dia zava-dehibe ny manome antoka fa Fiarovana asa fitoriana dia tanteraka soa aman-tsara araka izay azo atao araka izay; voalamina tsara, transportable, ambany-fikojakojana gropy milentika izay afaka manome hery vonjy taitra mitohy na dia ilaina.
AGG Power dia manolotra vahaolana fahefana mba hitsena ny fepetra ara-teknika ny vatana iraisam-pirenena, gropy milentika izay manome fahefana amin'ny saha hopitaly sy ny solosaina rafitra ao amin'ny toby miaramila sy ny didy sy ny fifandraisana fiara.
Ny iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra eo amin'ny fampiharana miaramila no afaka manome fiaviana roa-matetika gropy izay afaka miasa amin'ny roa 50 sy 60 Hz. AGG Power ihany koa ny miantoka synchronization vahaolana ho an'ny tetikasa maro izay mitaky mpamokatra mametraka ny mifandray amin'ny mirazotra.